Alarobia 16 Oktobra 2019. – FJKM
Alarobia 16 Oktobra 2019.
Indreto misy hafatra manokana ho antsika
1-Tandremo fa misy fetrany ny fandeferan’ny Tompo
Hoy Izy :” ianao efa nahafoy Ahy sady efa nihemotra , hoy i Jehovah ka dia hahinjitro koa ny tànako hamely anao , ka efa mandringana anao Aho , fa efa sasatra ny mandefitra “(and 6). Tena mandrakizay ny famindrampony” (Sal 136.1), saingy ny famaizana izay ambara eto koa dia anisan’ny famindrampony , ny fitiavany .
2-Mifikira amin’ny Tenin’ Andriamanitra
Hoy I Jeremia : “Hitako ny teninao ka nohaniko , ary ny teninao no fifaliako sy firavoravoan’ny foko. Fa nantsoina tamin’ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitr ny maro ô “(and16) ; Izany ihany no tokintsika kristiana . Izany no maha-sarobidy izao ezaka hamaky ny Baiboly manontolo ataontsika izao .
3-Mijoroa tsara ianao izay nantsoin’ny Tompo
Fieritreritra lalina izao teny izao .”Izao no lazian’I Jehovah : Raha hiverina ianao , dia horaisiko indray , ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala aminn’y zava-poana ianao , dia ho solom-bavako . Hanatona anao indray ireny , fa tsy ianao no hanatona azy . Ary hataoko manda varahina mirona ho amin’ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy , nefa tsy hahaleo anao , fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao Aho , hoy I Jehovah” . Saino ny fanomezan-toky fonosin’izany sy ny fepetra handraisana azy kosa .
“Raiso ny Tenin’ Andriamanitra” boky faha-6